Korontana volen’ ireo depiote : Ho avy indray ny iraky ny SADC -
AccueilRaharaham-pirenenaKorontana volen’ ireo depiote : Ho avy indray ny iraky ny SADC
Joaquim Chissano filohan’ i Mozambika teo aloha ihany no iraka manokana alefan’ny troikan’ ny SADC eto Madagasikara manoloana ny toe-draharaha izay misy amin’ izao fotoana izao, tsaroana hatrany ny zava- nitranga tamin’ ny 2009 anefa izay tsy nahitana vahaolana matotra, ary nanomezan-tsiny ny sori-dalana tamin’ izany fotoana. Ny faha-24 ny volana aprily lasa teo no nisy ny fivorian’ ny Troika sy ny governemantan’ny SADC, ka anisan’ny nodinihin’ izy ireo ny raharahan’ i Madagasikara. Raha ny tatitry ny fivoriana izy ireo dia hita ao amin’ ny andininy faha-16 sy ny faha-17 ary 18. Raha ny voalazan’izy ireo moa dia hoe “ manoloana ny zava-misy ao Madagasikara dia miantso ny vahoaka sy ny mpanao politika rehetra mba ho tony, mba hanaja hatrany ny lalàna ary handray ny fepetra rehetra ahafahana mametraka ny filaminana” .Ny andininy manaraka kosa indray dia milaza fa “ manoloana ireto zava-misy ireto, dia hisy ny iraka manokan’ny SADC ho avy any Madagasikara, dia tsy iza izany fa ny filoha teo alohan’ i Mozambika Joaquim Chissano. Izany dia mba ahafahana mahita marimaritra iraisana “ .
Hiverina amina sori-dalana indray ve izany i Madagasikara raha toa ka tsy nahomby izany teo aloha, ary tsy nampilamina velively ny tanindrazana, satria dia manomboka amin’izay dia baikom-bazaha hatrany no arahina. Ireo solombavambahoaka sy ireo vahoaka manaraka azy ireo dia tena azo lazaina hoe hanakorontana sy faly ampidina an’i Madagasikara anatin’ ny haizina lalina , indrindra amin’ izao enim-bolana tsy ahatongavan’ ny fifidianana izao. Aorian’ izay anefa dia malalaka tsara ny fifandimbiasam-pahefana amin’ny maha tany demokratika an’i Madagasikara. Ankoatra izay na dia mbola tsy tonga akory aza ny SADC, dia indro efa mampiantso sahady ny biraom-pifandraisan’ny sadc izay ahita fifampiresahana omaly. Midika izany fa efa izy ireo manomboka eto izany no mametraka, ka ilay fanjakana izay efa napetraky ny Malagasy no tiana hatao tsinontsinona. Izany hoe manomboka eto izany dia voahitsakitsaka ny fiandrianam-pirenena Malagasy.